မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လစ်သူယေးနီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုး | Dwave
Home သတင်းကဏ္ဍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လစ်သူယေးနီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုး
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လစ်သူယေးနီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုး
Posted By: D Waveon: November 26, 2017 In: သတင်းကဏ္ဍ, ခေါင်းကြီးသတင်းNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် (၁၃)ကြိမ်မြောက် အာရှ-ဥရောပ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး(ASEM)သို့ တက်ရောက်လာသည့် ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံခြားရေးနှင့်ကုန်သွယ် ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Peter Szijjarto အား နိုဝင်ဘာ၂၁ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၁ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မည့် အလားအလာတို့ကို အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် မြန်မာ-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန များအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ တည်ထောင်ခြင်းဆိုင် ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံခြားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. Mr. Peter Szijjarto တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ညနေ ၄ နာရီတွင် လစ်သူယေးနီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Darius Skusevicius အား လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး မြန်မာ-လစ်သူယေးနီးယား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အလားအလာတို့ကို ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ကြသည်။
တွေ့ဆုံမှုအပြီးတွင် မြန်မာ-လစ်သူယေးနီးယား နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန များအကြား ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် လစ်သူယေးနီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး H.E. Mr. Darius Skusevicius တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ညနေ ၅ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Prak Sokhonn အား လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံမှုအပြီးတွင် Between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia on Political Consultations နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး H.E. Mr. Prak Sokhonn တို့က လက်မှတ်ရေး ထိုးကြသည်။ (သတင်းစဉ်)
၁၃ ကြိမ်မြောက် ASEM နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှ သိသာထင်ရှားသည့်တိုးတက်မှုများရရှိခဲ့ဟု အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြော
(၁၃) ကြိမ်မြောက် အာရှ – ဥရောပ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲ ကျင်းပ